काठमाण्डौ । माछापुच्छ्रे बैंकले बागमती प्रदेशको धादिङस्थित सिम्लेमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ। बैंकले आज शुक्रबार औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी नयाँ शाखाको उद्घाटन गरेको हो। १६५ औँ उक्त शाखा कार्यालयको नेपाल पेट्रोलियम डिलर राष्ट्रिय महासंघका महासचिव विश्व प्रकाश अर्याल, थाक्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार आचार्य एवं...
काठमाण्डौ । बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड र युरोपा फिटनेस सेन्टरबीच बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङबाट क्यूआर कोड स्क्यान गरी भुक्तानी गर्दा बैंकको ग्राहकलाई २५% छुट उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ। सम्झौतापश्चात् ग्राहकले युरोपा फिटनेस सेन्टरमा उपलब्ध हुने फिटनेस सेवाहरुमा एकमुष्ठ २५%को छुट पाउनेछन्। उक्त छुटको...
काठमाण्डौ । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडले मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–४ स्कुलरोडमा आफ्नो २६ औँ शाखा उद्घाटन गरेको छ। मञ्जुश्री फाइनान्सकी अध्यक्ष इन्दिरा पण्डित घिमिरेले एक समारोहका बीच उक्त शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरिन्। २०७८ साल जेठ मसान्तसम्म रु. १ अर्ब ३५ करोड चुक्तापुँजी एवं रु. ५० करोड डिबेन्चर जारी गरेको...
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड भैरहवा शाखा र सिद्धार्थनगर सिटी अस्पतालबीच कर्मचारी तथा ग्राहकको उपचार सेवा विषयमा सम्झौता भएको छ। सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र सिद्धार्थनगर सिटी अस्पतालबीच विभिन्न सेवासुविधाहरुमा १० प्रतिशतसम्मको छुट प्रदान गर्ने गरी सम्झौता भएको हो। बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ...
काठमाण्डौ । सहज भनेर चिनिने नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम (एनएएमडीपी) दोस्रो चरणद्वारा जुन २८ मा एक सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहज च्यालेन्ज फन्ड राउन्ड १ का विजेताहरुको घोषणा गरिएको छ। कुल १८८ आवेदनमध्ये ५ नवीनतम समाधान तथा सेवा प्रदायक छनोट गरिएका थिए। कठिन स्क्रिनिङ र मूल्यांकन प्रक्रियापछि विजेताहरुको घोषणा गरिएको...
काठमाण्डौ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको प्रतिष्ठित अवार्डको रूपमा परिचित आइसिटी अवार्डको सातौं संस्करणको अनलाइन नोमिनेसन (आवेदन) आज जुलाई १ देखि खुला भएको छ। लिभिङ विथ आइसिटीको आयोजना र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुको सहकार्यमा आयोजनामा हुन लागेको ‘आइसिटी अवार्ड २०२२’ को नोमिनेसन आज शुक्रबारदेखि सुरु...
काठमाण्डौ । लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत काभ्रेको भकुण्डेबेसी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिलाई सहयोगस्वरुप ११ थान कुर्सी र १ थान टेबुल हस्तान्तरण गरेको छ। काभ्रेको नमोबुद्घ नपा–७ स्थित समितिलाई खानेपानी कार्यालय सञ्चालनका लागि बैंकको भकुण्डेबेसी शाखा कार्यालयका प्रमुख...
काठमाण्डौ । समृद्धि फाइनान्सले रेमिट्यान्स मुद्दति निक्षेपको योजनाअन्तर्गत ५ वर्ष ७ महिनामा पैसा दोब्बर हुने निक्षेप योजना सार्वजनिक गरेको छ। यसका साथ साथै फाइनान्सले ९ वर्षमा पैसा तेब्बर, १४ वर्षमा पैसा पाँचगुणा र १८ वर्षमा पैसा आठगुणा हुने निक्षेप योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ। यस निक्षेप योजनाको लक्षित ग्राहक, विदेशमा काम गर्ने...
काठमाण्डौ । स्टार्टअप वर्ल्डकपको नेपाल क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा असार २२ गते हुने भएको छ। विश्वका ७० देशमा हुने प्रतिश्पर्धा नेपालमा पहिलो पटक भौतिक रुपमा हुन लागेको स्टार्टअप वर्ल्डकपको नेपालको पार्टनर स्टार्टअप हब नेपालले जनाएको छ। गत वर्ष कोभिड महामारीका कारण सरकारले जारी गरेको लगडाउनले गर्दा स्टार्टअप वर्ल्डकपको नेपाल...
काठमाण्डौ । सीताराम दूधले विगत २५ वर्षदेखि नेपाली समाजमा गुणस्तरीय दुग्ध र दुग्ध पदार्थ (बटर, पनिर, लस्सी, दही, फ्रेस मिल्क, दूध) बिक्री वितरण गर्दै आएको कुरा समय सँगसँगै आफूलाई परिवर्तन गर्दै तथा उत्पादनहरुको प्यकिङमा नयाँपन दिन क्रममा हाल बजारमा बिक्रीबितरण गर्दै आइरहेको सीतारम घ्यु अब नयाँ प्याकिङमा बजारमा आजबाट बिक्रीवितरण सुरु...
काठमाण्डौ। अफेयर्स नेपाल प्रालिको आयोजनामा काठमाण्डौस्थित होटल र्‍याडिसनमा बृहत् शैक्षिक मेला सुरु भएको छ। बिहीबारदेखि सुरु भएकोे दुईदिने ‘स्टडी इन इन्डिया एक्स्पो’ नामक शैक्षिक मेलामा भारतका ४० भन्दा बढी विश्वविद्यालयको उपस्थिति रहने आयोजकले जनाएका छन्। आयोजकका अनुसार एक्स्पोमा कुन विषय अध्ययन गर्ने भन्ने द्विविधा...
काठमाण्डौ । “सबल बैंक, सफल सहकार्य” को नारालाई आत्मसाथ गर्दै नेपाली जनताको घरदैलोमा विगत २८ वर्षदेखि अनवरत रुपले गुणस्तरिय वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको भक्तपुर शाखाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं ६ नगरकोट, बेसीटोलस्थित रहेको चेतना आधारभूत...
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्ला ठुलीभेरी नगरपालिका–३ दुनै बजारमा २८९औ नयाँ शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। डोल्पाको दुनैमा नयाँ शाखा स्थापनासँगै ग्लोबल आइएमई बैंक नेपालको ७७ जिल्लामा शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने निजी क्षेत्रको पहिलो बैंक बनेको छ। बैंकले ७७ जिल्लामा २८९ शाखा, २६२ एटीएम,...
काठमाण्डौ । कुमारी जबद्वारा सञ्चालित ‘प्रोफेसनल एचआर ट्रेनिङ’ सम्पन्न भएको छ। नेपालका विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाका अनुभवी र दक्ष व्यक्तित्वहरुद्वारा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको ट्रेनिङको यो पहिलो ब्याच हो। विभिन्न संघसंस्थामा कार्यरत अनुभवी व्यक्तित्वदेखि मानवसंसाधनको क्षेत्रमा आफ्नो करिअर बनाउन चाहने व्यक्तिहरुको सहभागिता...